The Irrawaddy's Blog: အဆိုတော် အီတိုးတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘာဖြစ်သွားတာလဲ
အဆိုတော် အီတိုးတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘာဖြစ်သွားတာလဲ
မြန်မာနိုင်ငံက ရော့ခ် အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ သားဖြစ်သူ အဆိုတော် အီတိုး ခေါ် ကိုဝင်းထွဋ်သော်တာ ဟာ ဒေါ်မြင့်မြတ်သူနဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်စဉ်မှာ ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာတွေ အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်ခဲ့လို့ အခု
တော့ တရားရုံး တက်ကာ ကွာရှင်းလိုက်ကြပါပြီ လို့ ဒေါ်မြင့်မြတ်သူက သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာထည့်ထားပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့က တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်း ကတိလက်မှတ်တွေ အသီးသီး ရေး ထိုးပြီးပြီ၊ ဒေါ်မြင့်မြတ်သူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်စေမယ့် အပြောအဆိုအပြုအမူများ မလုပ်ပါနဲ့ လို့ ကြော်ငြာမှာ ရေးထားပါတယ်။
ဘာကြောင့် ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသေးစိပ်မပြောထားပေမယ့် သူတို့ ၂ ဦးမှာ သားလေး တဦး ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကမှ သားဦးလေးကို ဖွားမြင်ခဲ့ကြတာပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ မင်္ဂလာပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါ။
အဲဒီတုန်းက မင်္ဂလာ ဘိသိက်သွန်းပွဲ နှင့် မော်ကွန်းတင် လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲကို အောက်တိုဘာ လ ၂၁ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီက ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေ ဘုရားလမ်းရှိ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပခဲ့တာလည်း ဖြစ် ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ်-၉၊ န၀ဒေးလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နေ ဦးဇော်ဝင်းထွဋ် (EMPEROR MUSIC GROUP) နှင့် ဒေါ်မေခိုင်အုန်း တို့ရဲ့ သားငယ် ၀င်းထွဋ်သော်တာ(ခ) အီတိုးနဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ်-၁၊ သီရိရတနာလမ်း၊ ဘောက်ထော် ၁၆ ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်နေ ဦးနေ၀င်းထွန်း (ဥက္ကဌ RUBY DRAGON COMPANIES) နှင့် ဒေါ်နန်းအေးအေးမြင့် (ဒါရိုက်တာ RUBY DRAGON COMPANIES) တို့ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ မြင့်မြတ်သူ တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို အီတိုး ရဲ့ အဘွားဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ထားက အတိုင်းမသိ အခါတော် အမည်ရ တေးသီချင်းနဲ့ သီကျူး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထားသီဆိုမှုမှာ တီးခတ်ပေးခဲ့တာက အလင်္ကာ ၀တ်ရည် မြန်မာသံ တေးဂီတ အဖွဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ် မသိပါဘူး။
Posted in: အနပညာရပ်ဝန်း
မင်္ဂလာဆောင်ထားတုန်းက ကုန်ထားတဲ. ပိုက်ဆံတွေ နှမြောလိုက်တာ ။
kto said... :
Ever November said... :
အိုက်စိုင်း said... :
ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ စပွန်ဆာ ထူး သူဌေးကြီး တေဇ နဲ့ ပတ္တမြားနဂါးပိုင်ရှင် နေဝင်းထွန်း တို့ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲလား မသိ :P
မိန်းမ မကြောက်လို့နေမှာပေါ့.... မိန်းမတွေက ဆရာမကြီး မလုပ်ရရင် ပြဿနာ မိးထွန်းရှာတတ်တာ.. ယောင်္ကျားတွေ က အဲ့ မိန်းမတွေ ဆရာမကြီး လုပ်တာ သီးမခံနိုင်ရင်. ကွဲတော့တာပဲ... နင့်အမေရောလို့ပြန်မမေးနဲ့အားလုံး အတူတူပဲ.. အနည်းနဲ့အများပဲ ကွာတယ်.. t
ဒါထူးဆန်းသလားဧရာဝတီရယ်။ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။ မကောင်းတော့လည်းညောင်းပေါ့။ အမျိုးသမီးဘက်ကလည်း ဘယ်လောက်ကုန်ထားသလဲမှ မသိတာ။ အန်တီဒေါ်ထားကို အားနာပါတယ်ခင်ဗျား။